News - Non-kpara: The Textile maka Ọdịnihu!
Nonwoven kpọrọ nkụ ehichapụ
Mkpọchi kpọrọ nkụ ehichapụkwa
Ihe nhicha ụlọ ọrụ
2cm DIA abịakọrọ Mkpụrụ ego anụ ahụ
4.5cm DIA abịakọrọ Towel
Abụọ Face Ikpuchi
Disposable Personal Towels
Disposable Bath akwa nhicha
Disposable Hair Towel
Uwe Ahịrị Ihu Ihu
Ihe nhichapu etemeete
Mma Roll akwa nhicha
Na-abụghị kpara: The Textile maka Ọdịnihu!
Okwu nonwoven aputaghi “ihe nkpuchi” ma obu “uzo”, mana akwa di otutu karie. Achọghị nke ọma bụ akwa akwa nke ana - ewepụta site na eriri site na ijikọ ma ọ bụ ijikọ ma ọ bụ ha abụọ. O nweghi usoro ihe omuma a haziri ahazi, kama obu ihe sitere na nmekorita di n'etiti otu eriri na ozo. Mgbọrọgwụ nke ndị na-adịghị eri nwere ike ọ gaghị edo anya mana okwu a bụ "akwa na-abụghị nke akwa" bụ nke e guzobere na 1942 ma mepụta ya na United States.
A na-eme akwa ndị na-enweghị akwa na isi ụzọ 2: a na-egbutu ha ma ọ bụ na-ejikọta ha. Felted non-kpara akwa na-emepụta site layering mkpa Ibé akwụkwọ, mgbe ahụ n'itinye okpomọkụ, mmiri & nsogbu ịda mbà & mpikota eri ndị n'ime a oké matted akwa nke na-agaghị ravel ma ọ bụ fray. Ọzọ enwere ụzọ atọ dị mkpa iji mepụta akwa ndị anaghị eyi akwa: Dry Laid, Wet Laid & Direct Spun. Na akọrọ Laid Non-kpara Fabric n'ichepụta usoro, a web nke emep uta eri na-tọrọ na a drum na-ekpo ọkụ ikuku na-agbara ndibọp emep uta eri ọnụ. N'ebe a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na Wet-Laid, a na-agwakọta eriri nke ihe na-eme ka ihe dị nro nke na-eme ka eriri ahụ jikọọ wee mezie ya. N'ime usoro imepụta ihe na-enweghị ntụpọ, a na-atụgharị eriri ndị ahụ na eriri na-ebufe ma na-agbazi glues na eriri ndị ahụ, nke a na-eme ka ha nwee njikọ. (Ọ bụrụ na eriri thermoplastic, a chọghị gluu.)
Ngwaahịa na-enweghị akwa
N’ebe ọ bụla ị na-anọdụ ma ọ bụ na-eguzo ugbu a, na-elegharị anya naanị ma ị ga-ahụ ma ọ dịkarịa ala otu akwa na-enweghị akwa. Uwe na-akwa akwa na-abanye n'ọtụtụ ahịa gụnyere ọgwụ, uwe, akụrụngwa, nzacha, iwu, geotextiles na nchekwa. Kwa ụbọchị, iji akwa na-enweghị akwa na-abawanye ụba ma ọ bụrụ na ha enweghị ndụ anyị ugbu a ga-abụ ihe a na-apụghị ịghọta aghọta. Ihu ọma e nwere 2 ụdị nonwoven ákwà: Inogide & mkpofu. Around 60% nke nonwoven ákwà bụ inogide na-ezu ike 40% bụ mkpofu.
Ole na ole ohuru no Non-kpara Industry:
Achọghị ụlọ ọrụ na-enweghị ihe ọhụụ na oge na-achọ ihe ọhụụ na nke a na-enyekwa aka ịkwalite azụmaahịa ahụ.
Surfaceskins (Nonwovens Innovation & Research Institute- NIRI): Ọ bụ ụzọ mgbochi antibacterial na-agbanye mpempe akwụkwọ na ịdọ aka na-arụ ọrụ iji gbuo ụmụ nje na nje dị mkpa n'ime sekọnd dị mkpa, n'etiti otu onye ọrụ na onye na-esote nke na-agafe n'ọnụ ụzọ. N'ihi ya, ọ na - enyere aka igbochi mgbasa nke nje na nje n'etiti ndị ọrụ.
Reicofil 5 (Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG): Teknụzụ a na-ewepụta teknụzụ kachasị arụpụta, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma nke na-ebelata mpempe siri ike site na 90 pasent; enwekwu mmepụta ruo 1200 m / min; na-edozi oge mmezi; na-ebelata ike oriri.
Na-echegharị ™ Compound Hernia Patch (Shanghai Pine & Power Biotech): Ọ bụ ihe ntanetị na-arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ dị oke ọnụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-eje ozi dị ka onye na-eto eto maka mkpụrụ ndụ ọhụrụ, n'ikpeazụ biodegrading; na-ebelata ọnụego nke nsogbu post-operative.
N’ịnọgide na-etolite oge etolite etolite n’ime afọ iri ise gara aga, ọ bụghị n’akụkụ nwere ike ịbụ ọwụwa anyanwụ nke ụlọ ọrụ textile zuru ụwa ọnụ nwere oke uru karịa ngwaahịa ọ bụla ọzọ. Ulo ahia zuru ụwa ọnụ nke akwa a kpara akpa na-eduzi China na oke ahia nke ihe ruru 35%, Europe na-esote ya na 25%. Ndị na-eduzi egwuregwu na ụlọ ọrụ a bụ AVINTIV, Freudenberg, DuPont na Ahlstrom, ebe AVINTIV bụ onye na-emepụta ihe kachasị ukwuu, yana òkè ahịa mmepụta ihe dị ihe dịka 7%.
N'oge na-adịbeghị anya, na ịrị elu nke okwu COVIC-19, ịchọrọ maka ịdị ọcha & ngwaahịa ọgwụ nke akwa na-enweghị akwa (dịka: mkpuchi ịwa ahụ, ihe nkpuchi ịwa ahụ, PPE, akwa mkpuchi ahụike, mkpuchi akpụkpọ ụkwụ wdg) abawanyela ruo 10x ka 30x na mba dị iche iche.
Dị ka otu akụkọ nke ụlọ ahịa nyocha ahịa kachasị ukwuu n'ụwa "Research & Markets", ahịa Global Nonwoven Fabrics weere $ 44.37 na 2017 ma na-atụ anya iru $ 98.78 site na 2026, na-eto na CAGR nke 9.3% n'oge oge amụma. A na-echekwa na ahịa na-adịgide adịgide na-abụghị nke kpara ga-eto site na ọnụego CAGR dị elu.
N'ihi Gịnị Ka A Na-ejighị Achọ?
Ndị na-emeghị ihe ọhụụ na-agbanwe agbanwe, ihe okike, ụdị dịgasị iche iche, teknụzụ dị elu, na-eme mgbanwe, dị mkpa ma na-emebi emebi. Isdị akwa a na-emepụta ozugbo site na eriri. Ya mere, ọ dịghị mkpa maka usoro ịkwado yarn. Usoro mmepụta ihe dị mkpụmkpụ ma dịkwa mfe. Ebe a ga-emepụta akwa ejiri 5,00,000 mita, ọ na-ewe ihe dị ka ọnwa 6 (ọnwa 2 maka ịkwado yarn, ọnwa 3 maka ịkwa akwa na looms 50, ọnwa 1 maka imecha & nyocha), ọ na-ewe naanị ọnwa 2 iji mepụta otu ụdị na-abụghị kpara akwa. Ya mere, ebe ọnụego nke akwa a kpara akpa bụ 1 mete / nkeji na ọnụego mmepụta nke akwa a kpara akpa bụ mita 2 / nkeji, mana ọnụego mmepụta nke akwa na-abụghị kpara bụ mita 100 / nkeji. Ọzọkwa mmepụta eri dị ala. E wezụga, nonwoven ákwà na-egosipụta kpọmkwem Njirimara ndị dị otú ahụ dị ka elu ike, breathability, absorbency, anwụ ngwa ngwa, ìhè arọ, retard ire ọkụ, disposability wdg N'ihi ihe ndị a niile phenomenal atụmatụ, akwa oru na-akpụ akpụ kwupụta na-abụghị kpara akwa.
Non-kpara akwa a na-ekwukarị na ọ ga-abụ ọdịnihu nke ụlọ ọrụ textile dị ka mkpa ha zuru ụwa ọnụ & ịdị na-arịwanye elu & elu.
Post oge: Mar-16-2021